Maxaa u sabab ah inay Tottenham ku guuldarreysato saxiixa Lautaro Martinez? – Gool FM
(London) 22 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa quus ka taagan saxiixa weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez walow wararka qaar ay sheegayeen inay labada naadi ku heshiiyeen qiimaha iibka laacibkan.
Hilinka Goal ayaa horraan baahiyay inay Spurs iyo Inter ku heshiiyeen qiimaha iibka Martinez iyadoo sidoo kale tartanka loogu jiro saxiixiisa uu u furan yahay weli naadiga Atletico Madrid oo xiiseyneysa adeeggiisa.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska ay Tottenham ku dooneyso xiddiga reer Argentina ayaa ku dhow fashil maadaama laacibka uu iska diiday dalabaadkii ay kooxda reer England soo hordhigtay si uu usii joogo Nerazzuri waxaana arrintaas shaaciyay guddoomiyaha fulinta kooxda Serie A difaacaneysa ee Giuseppe Marotta.
23-jirkan oo Inter kula jira qandaraas dhici doona labo sano kaddib ayaa doonaya inuu baaqi kusii ahaado kooxdiisa taasoo niyadda u wanaajineysa taageerayaasha kooxda reer Taliyaani maadaama ay dhowaan lumiyeen Romelu Lukaku oo ku biiray Chelsea.
Manchester United oo ka shaqeyneysa inay qandaraaska u kordhiso mid ka mid ah xiddigaha laf-dhabarta u ah